Global Voices teny Malagasy » Filipina: Vondrona Miaro Ny Zon’olombelona, Mangataka ny Apple Hamafa Ireo Kilalao Manindrahindra ny Ady Ataon’ny Filoha Duterte Amin’ny Rongony · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2017 13:09 GMT 1	 · Mpanoratra Karlo Mongaya Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
Maherin'ny 130 ireo fikambanana erantany no nanao sonia ilay fanangonan-tsonia  mangataka ny Apple Inc.  mba hanàla ao amin'ny toeram-pivarotany ireo karazana kilalao amin'ny finday  izay manome voninahitra ny “ady amin'ny rongony” any Filipina.
Nalefa ho an'ny Filoha tale Jeneralin'ny Apple, Tim Cook , natao sy naparitaky ny Tambajotra Aziatikan'ireo Olona Mampiasa Rongony (AMPUD)  ilay fanangonan-tsonia, fikambanana mitoetra any Thailand izay manindrahindra ny fahasalamana sy fiarovana ireo zon'olombelona ho an'ireo mpampiasa zava-mahadomelina.
Fa lasa nalaza be vetivety teo ireo hetsika ady amin'ny rongony nataon'ny polisy (fantatra amin'ny hoe Oplan Tokhang) noho izy ireo nahatonga famonoana olona an'arivony noahiahiana ho misera rongony. Naharakitra  famonoana miisa 6.000 mifandraika amin'ny rongony ny polisy, fa milaza anefa ireo vondrona sasany mpiaro zon'olombelona fa maherin'izany ny isan'ireo maty, any ho any amin'ny 13.000 . Na ny vondrona iraisam-pirenena aza naneho ny antso fanairana  manoloana ny famonoana be miseho, mifandraika amin'ny rongony eo amin'ny firenena,.
Ny governemanta Duterte dia ampangain'ireo vondrona samihafa mpiaro zon'olombelona ho maneho fanohanana  ny tsimatimanota amin'ny alàlan'ny fiverimberenan'ny fiarovana ny polisy, anisan'izany ireo izay voarohirohy tamin'ireo vono olona ivelan'ny fitsaràna.
Ny volana Oktobra 2016 lasa teo, notaterin’  ny Global Voices fa ny iray amin'ireo lalao ireo, ny Fighting Crime, dia nahatratra roa tapitrisa ny nitrohana azy. Fighting Crime, novokarin'i Tatay Games, ahafahan'ny mpilalao hilalao ny anjara andraikitr'i Rody (solonanaran'i Duterte). Ny tanjon'ny mpilaalo dia ny mitifitra sy mamono ireo meloka amin'ireo karazana fitaovam-piadiana sy hery manokana maro. Tapitra ny lalao raha ireo fahavalo ireo no mahita aloha ny filoha mialohan'ny hahatifirany azy ireo.
Lalao iray hafa indray, Tsip Bato: Ang Bumangga Giba! no novokarin'i  Ranida Games niaraka tamin'ny fanohanan'ny Vondron'ny Fiarahamionim-Pifandraisana ao amin'ny Polisy, izay vondrona ao anatin'ny Polisim-Pirenena Filipiana. Afaka mitàna ny andraikitr'i sefo Ronald “Bato” Dela Rosa na ny an'ny Filoha Duterte ireo mpilalao, mitondra fiaran'ny polisy ary mitifitra na manenjika ireo olo-meloka mihaodihaody eny an-dàlambe.
Toa mampahatsiahy ny fomba nanitsahan’ ny fiaran'ny polisy ireo indizena sy vitsy an'isa mpanao hetsi-panoherana nanoloana ny Masoivohon'ny Etazonia ny taona lasa ilay fihetsika fandavoana ireo fahavalo ao anatin'ny lalao.
Duterte vs Zombies, kilalao novokarin'i Lemuel Levi Caldito, mampitaha  ny ady amin'ny rongony ataon'i Duterte amin'ny apokalipsanà faty mitsangana. Mandrindra ny olona lalaovina “Tatay Digong” (anaram-petaka mahafinaritra omen'ny filoha ampiasain'ireo mpanohana azy, izay midika ara-bakiteny hoe “Ray Duterte”) ireo mpilalao, miady amin'ireo olo-meloka aseho ho toy ny faty mitsangana tsy misy atidoha sy lian-drà.
Tao anatin'ny taratasy misokatra nalefan-dry zareo, nanipika ny sasany amin'ireto lohahevitra ireto ireo mpiaro zon'olombelona, miampanga ny firaisan'ny Apple tsikombakomba amin'ny fanaovana ho mety ireo famonoana tsy ara-dalàna sy ny tsimatimanota . Ampahatsiahivin'ireo mpanasonia amin'ilay orinasa fa mety hahafinaritra ireo lalao, saingy kosa manaparitaka hafatra mampidi-doza izy ireo:
Milaza ihany koa ilay taratasy fa ireo lalao ireo dia manitsakitsaka ny App Store Review Guidelines  (Torolàlana arahan'ny fivarotana fampiasa) an'ny Apple, amin'ny fisian'ny herisetra tsy azo lavina. Sady amin'izay indray, ireo torolàlana ireo dia mandràra ny “endrika tena izy anà olona na biby vonoina, kilemaina, ampijaliana, na voaolana, na votoaty mandrisika herisetra” (andalany Faha- 1.1.2). Afaka hita ao amin'ny Google Play Store ihany koa ireo lalao nalaina avy tamin'ny tantaran'i Duterte ireo.
Ahitàna vondrona miisa 131 mpiaro zon'olombelona, ivontoerana fanarenana, ary tambajotranà mpisolovava hafa avy amin'ny firenena maherin'ny 30, ireo mpanao sonia , tafiditra amin'izany Aostralia, Kambodiza, Frantsa, India, Indonezia, Nepal, Netherlands, Pakistana, Romania, Singaporo, Sri Lanka, Thailand, ny Royaumes Unis ary Etazonia, ankoatra ireo hafa maro.
Nitranga tao anatin'ny fitroaran'ireo hetsi-panoherana  io hetsika manohitra ny lalao nalaina tamin'ny tantaran'i Duterte io, tsy hoe fanoherana ireo famonoana fotsiny ihany, fa ihany koa ny fandrahonan'ny filoha ny hampihatra lalàna miaramila raha toa ireo vondrona mpanohitra ka manohy manao hetsika ‘fanozongozonana’ ny governemanta.
Nanery ny polisy hanambara ny fahataperan'ny  hetsika tamin'ny voalohandohan'ity volana ity ny hatezeram-bahoaka manohitra ireo fanamparam-pahefana atao amin'ny anaran'ny Oplan Tokhang. Eo ambany fitantanan'ny Masoivoho Filipiana Miady Amin'ny Rongony ankehitriny ny hetsika miady amin'ny rongony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/30/109254/
 Apple Inc.: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
 kilalao amin'ny finday: https://globalvoices.org/2016/10/12/millions-are-playing-dutertes-war-on-drugs-on-their-mobile-phones/
 Tim Cook: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Cook
 Tambajotra Aziatikan'ireo Olona Mampiasa Rongony (AMPUD): http://www.anpud.org
 antso fanairana: http://www.philstar.com/headlines/2017/09/29/1743809/39-countries-worry-about-killings-climate-impunity-philippines
 famonoana tsy ara-dalàna sy ny tsimatimanota: https://globalvoices.org/2017/09/14/teen-killings-show-how-vulnerable-communities-suffer-the-brunt-of-the-philippine-governments-war-on-drugs/
 mpanao sonia: http://www.anpud.org/an-open-letter-to-apple-ceo-mr-tim-cook-immediately-remove-apps-that-are-promoting-war-on-drugs-in-the-philippines/
 fitroaran'ireo hetsi-panoherana: https://globalvoices.org/2017/10/04/tens-of-thousands-in-the-philippines-rally-against-president-dutertes-deadly-triple-wars/